Meksika: Raharaha fakàna an-keriny niantraika tamin’ny fifandraisana ara-diplaomatika amin’i Frantsa. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Marsa 2011 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny polski, 繁體中文, 简体中文, Español, Français, English
Ny Filoha Meksikana Felipe Calderón sy ny Filoha Frantsay Nicolas Sarkozy teo am-pisakafoanana ny 26 jona 2010. Sarin i Gobierno Federal, nampiasaina tamin ny CC BY-NC-SA 2.0 license
Meksika sy Frantsa dia manana olana lehibe ara-pifandraisana diplaomatika noho ny fanamelohana ny fakana an-keriny natao-na teratany Frantsay tao Meksika. Florence Cassez no anarany, ary voasambotra tamin'ny taona 2006 izy, nampangaina ho nanao fakana ankeriny ary voasazy 60 taona an-trano-maizina.
Ny sakaizan'i Cassez dia mpitarika andian-jiolahy antsoina hoe “Los Zodiacos” (midika hoe ry zaravintana), ary ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo nalaina an-keriny no nanamarina fa anisan'ireo andian-jiolahy tokoa izy.
Tamin'ny taona 2009, namangy an'i Meksika ny Filoha Frantsay Nicolas Sarkozy ary nangataka ny fahafahan'i Cassez nandritra ny fivahiniany tany. Tokony naverina any Frantsa i Cassez saingy tsy nanaiky ny governemanta Meksikana, izay noteren'ny fikambanana nasionaly “manohitra ny fakana an-keriny”. Ny filazan'izy ireo dia mifototra amin'ny tsy fahatokisana fa mety hahenan'ny manam-pahefana Frantsay ny didim-pitsarana rehefa tonga any amin'ny taniny i Cassez. Nanazava ny fanerena nataon'ny fikambanana tamin”ny governemanta Meksikana” ny bilaogera AguaChile :
Tao Meksika, indrindra, ONG mpanohitra ny fakàna an-keriny malaza tahaka an'i Isabel Miranda de Wallace”s Alto al Secuestro, Alejandro Martí's México SOS sy María Elena Morera's Causa en Común, dia resy lahatra amin'ny fiampangana an'i Cassez’ ary niantso ny Filoha Frantsay Nicolas Sarkozy mba tsy hitsabaka amin'ny raharaha.
Amin'ity taona ity, ny “Taonan'i Meksika ao France” dia tokony hankalazaina misesisesy amin'ny fampisehoana ara-kolontsaina sy ara-barotra mihoatra ny 350 nomanina amin'ity taona 2011 ity. Nanambara i Frantsa tamin'ny voalohany fa handroso izy ireo amin'ny fampisehoana ary hampiasa izany, ary etsy andaniny, mba hanintona ny saina momba ny raharaha Cassez. Nanambara ny manam-pahefana Meksikana fa tsy hanohana ny fandehan'ny “Taonan'ny Meksika” sy tsy hamindra an'i Cassez izy ireo.
Ao amin'ny Twitter, ireo olom-pirenena avy amin'izao tontolo izao dia nampiaka-peo. Nandefa hafatra i Juliamanda Garza (@juliagarza) ho an'ireo gazety frantsay:
Andriamatoa #Sarkozy: Aza tapahina ny fifandraisan'i Frantsa-Meksikana ! cc:@lemondefr @Le_Figaro
Ny mpampiasa enrique-ana (@Desmorningchouu) dia ni-tweet fa ny fanapahan-kevitr'i Sarkozy dia mifototra amin'ny fitadiavan-daza any amin'ny vahoaka:
Ny mpanao politika tsy mahita fomba hankalazana ny tenany amin'ny fifidianana ho avy no no mampisy disadisa eo amin'i Frantsa – Meksika
Nanao kivazivazy mahakasika ny raharaha i Santo García (@Santo_):
@Sarkozy Hovaiko ho Bruni i Cassez? eny sa tsia?
Nampiseho hevitra feno fanantenana i Ximena Vega tamin'ny blaogy Vivir Mexico [es], nanoratra lesona azo raisina momba an'i Meksika:
Hitako fa ny lesona ngezabe notsoahina momba an'i Meksika, Ankoatra ny fitadiavan-kevitr'i Sarkozy mitady ny fomba rehetra hampitombo ny fankafizana avy amin'ireo olona vitsy mahamenatra 38% , dia tokony arahimaso ny famerenana ny zavamisy nanaovana ny heloka bevava, ary tahaka izany koa ny hanaraha-maso ny fanambarana sy ny filazana .Ny polisy federaly sy ny polisim-paritra tsara ofana kokoa sady voaofana kokoa, dia mahomby lavitra mihoatra ny valim-pitsarana sy ny krizy ara-diplomatika ary ny fanafahana mpaka an-keriny.